နင်လားဟဲ့ ကံတရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » နင်လားဟဲ့ ကံတရား
Posted by စဆရ ကြီး on Nov 16, 2012 in Think Different | 35 comments
ကျွန်တော်သည် အတော်လေး ဂွကျကျ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မည်မျှ ဂွကျသနည်းဆို ငယ်စဉ်က ရှမ်းဘောင်းဘီသာ ၀တ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပေမည်။ သူများတွေ ဖင်ကျပ်ဝတ်နေချိန်တွင် ဂွကျကျဘောင်းဘီကြီးဖြင့် လူကြားထဲသွားရသည်ကို ဂုဏ်ယူမိခြင်းလဲဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ၀တ်ရန်မဖြစ်နိုင်သေးသဖြင့် အသာလေးငြိမ်နေရသည်။ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေဖြစ်ရန် လူတစ်ကာအကြိုက် မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီးနေနေရသည်။ ဒါတောင်မှ တစ်ခါတစ်လေ ၀ယ်လာသည့်ဘောင်းဘီကို ပြင်မ၀တ်ပဲ ဂွကျကျ ၀တ်ဆင်ပြီး လျှောက်သွားတတ်သေးသည်။ ထိုမျှဂွကျသည့်သူပင်။
ကိုရင်ရှူံးငယ်စဉ်က ကျောင်းသားဘ၀တွင်ဖြစ်၏။ သင်္ချာဆရာမှ ၁ နှင့် ၁ ပေါင်းလျင် နှစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ကို ၃ ဖြစ်သည်ဟု ခံငြင်းဖူးသဖြင့် အရိုက်ခံခဲ့ရဖူးသည်။ ဆရာမှ ၁ နှင့် ၁ ပေါင်းခြင်းသည် ၂ ဖြစ်သည်ဟု ဇွတ်အတင်း ၀န်ခံခိုင်းသဖြင့် အရိုက်ခံရမည်ကြောက်သည်နှင့် နောင်မေးတိုင်း ၂ ဟုသာဖြေခဲ့ဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံးအမြင်မှာဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခုကို တစ်ခြားနိုင်ငံက သိမ်းပိုက်လိုက်လျင် ပေါင်းစပ်ခြင်းရလာဒ်အဖြစ် ၁ သာကျန်ခြင်း၊ လူယောကျာ်းတစ်ယောက်နှင့် လူမိန်းမတစ်ယောက် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အဖြေ ၂ မရပဲ ၃၊ ၄၊ ၅ အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြိုင်မငြင်းတော့ပါ။ ကိုယ့်ထက်တတ်လို့ ဆရာလုပ်နေတာပေမလား.. သူတို့ပြောတာ အမှန်ပဲဟု လက်ခံခဲ့ရသည်။
ကိုရင်ရှူံးမိသားစုတွင် မောင်နှမသုံးယောက်ရှိသည့်အနက် ကိုရင်ရှူံးမှာ အလပ် (အလတ်မဟုတ်ပါ)ဖြစ်သည်။ အထက်တွင် အစ်မတစ်ယောက်၊ အောက်တွင်ညီတစ်ယောက်ရှိသည်။ အစ်မဖြစ်သူမှာ သမီးဦးဖြစ်သည့်အတွက် မိဘများမှ တုန်နေအောင်ချစ်လေသည်။ ကိုရင်ရှူံးညီမွေးဖွားပြီးသည့်နောက် မိခင်ဖြစ်သူမှာ သားသမီး(၃)ယောက် တော်လောက်ပြီဟု ယူဆကာ သားကြောဖြတ်လိုက်သဖြင့် နောက်ထပ်ကလေးမရနိုင်တော့ဟူသော အသိဖြင့် အထွေးဆုံးသားလေးကို တစ်ယုတစ်ယချစ်ကြလေသည်။ ဒီလိုဆို ကိုရင်ရှူံးကရော? ကျောင်းတစ်နှစ်တက်တိုင်း အစ်မထံမှ တစ်နှစ်သုံးပြီးသား လွယ်အိတ်၊ ကွန်ပါဘူး၊ ပေတံ၊ အစရှိသည်တို့ကို အပိုင်စားရသည်။ ကိုရင်ရှူံးညီမှာ သူငယ်တန်းကပင်ကျူရှင်စထားပေးရလေသည်။ ကျောင်းတွင် အတန်းပိုင်ဆရာမထံတွင် မျက်နှာငယ်မည်စိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံးမှာ ဆယ်တန်းသာအောင်ခဲ့သည်။ မည်သည့်ကျူရှင်မျှ မတက်ခဲ့ရ။ မျက်နှာမငယ်လောက်ဘူး၊ မျက်နှာကြီးတယ်ဟု ထင်သောကြောင့်ဖြစ်ပေမည်ဟု ဂွတီးဂွကျ တွေးခဲ့ဖူးသည်။ ထားပါတော့လေ… မိဘပဲ၊ ကောင်းစေချင်လို့ လုပ်တာပဲလေဟု ၁၆ နှစ်သားထိ ငြိမ်ခံလာခဲ့ပြီးမှ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းဆက်မထားနိုင်တော့ဟုပြောသည့်အခါ၊ တစ်ဖက်တွင် ဆယ်တန်းနှစ်နှစ်လုံး သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်၊ တက်ချင်သည်ဆိုသည့် ကျူရှင်ကို မရမကထားပြီး ဒုတိယနှစ်တွင် ရမှတ် ၄၀ တိတိများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သော သမီးကြီးအား တက်ချင်သည့် တက္ကသိုလ်ထားရန် အားကြိုးမာန်တက်ဖြစ်နေသော မိဘများအား စွန့်ခွာထွက်လာခဲ့တော့သည်။ ဘာပဲပြောပြောလေ… မိဘတွေမလား၊ မိဘတိုင်းသားသမီးကို တန်းတူချစ်တာပါပဲ၊ ရင်နဲ့လွယ်မွေးလာရတာပဲ၊ အနန္တော အနန္တငါးပါး မပြစ်မှားကောင်းသဖြင့် ကိုရင်ရှူံးလည်း ပြစ်မှားမိမည်စိုးသည်နှင့် ကိုယ့်ဖာသာရပ်တည်ခဲ့တော့သည်။
အကြောင်းအရာ တိုက်ဆိုင်သည့်အခါ လူကြီးသူမများနှင့် ဘ၀အကြောင်း ပြန်ပြောင်းဆွေးနွေးကြည့်ပါ၏။ ထိုအခါမှ လူတစ်ကာ ရေလဲသုံးနေသော “ကံ” ဆိုတာကြီး ကိုရင်ရှူံးနှင့် တည့်တည့်တိုးလာရတော့သည်။ ဆရာတော်များထံ မေးမြန်းစနည်းနာသည့်အခါတွင်လည်း ထို “ကံ” ကြီးသည်ပင် ကိုရင်ရှူံးနှင့် သက်ဆိုင်နေပြန်သည်။ မကျေမချမ်းဖြင့် မိဘများအား အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်လာရသနည်းဟု မေးမြန်းပြန်တော့လည်း ထို “ကံ” ကြီးကပင် ဓါးစာခံ ဖြစ်နေပြန်သည်။ ကိုရင်ရှူံးဘာလုပ်လုပ် ထိုဟာကြီးကြောင့်ပင် ဖြစ်နေရခြင်းဟုဆိုပြန်သေးသည်။ ဗုဒ္ဒဘာသာမှန်လျင် “ကံ ကံ၏အကျိုး” ကို ယုံကြည်ရမည့်အကြောင်း၊ “ကံမရှိ ဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ” ဟု ဆိုကြပြန်သေးသဖြင့်လည်းကောင်း ကိုရင်ရှူံးလည်း ထိုဟာကြီးကို လုံးဝဥသုံ မယုံကြည်သဖြင့် ကိုးကွယ်ရာလဲ စွန့်ခဲ့သည်။
ယနေ့ နန်းတော်ရာသူပို့စ်တွင် တွေ့လိုက်ရသည်။ ကံ ဆိုသည်မှာ အလုပ်ဟုဆိုသော်လည်း ထို ကံဆိုသည့် အရာကြီးမှာ ယခင်က လူတစ်ယောက်လုပ်ခဲ့တာကို ယခုခံစားနေရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုသက်ရှိထင်ရှားလူကြီး လုပ်နေသည်များမှာ နောက်တစ်ဘ၀တွင် ဖြစ်လာမည့်လူကြီးခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားဥစ္စာဆိုသည်မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာလျင် ပင်ပန်းလှကြောင်း၊ ကံ ဆိုတာကြီးက ပေးလာပါမှ ရနိုင်ကြောင်း၊ သေကောင်ပေါင်းလဲ မည်မျှရှာဖွေပါသော်လည်း ကံ ဆိုတာကြီးက ကြည်ဖြူမှ အောင်မြင်တိုးတက်နိုင်ကြောင်း အစရှိသည့် အဓိပ္ပါယ်ရသည့်စကားများကို ဖတ်ရှူရပြီးသည့်အနောက် ကိုရင်ရှူံးနှင့် ကမ္ဘာ့ရန်ဘက် ထို “ကံ” ဆိုတာကြီးအကြောင်း စာတစ်တန်၊ ပေတစ်ဖွဲ့ရေးဖို့ဖြစ်လာပြန်သည်။
ဆိုကြပါစို့၊ မြန်မာပြည်သူအများစု(လွန်လွန်ကျူးကျူး) ယုံကြည်ကြသည့် ထိုအရာကြီးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်နောက်ကျန်နေခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၂ လရာသီပါတ်လုံး ပွဲလမ်းသဘင်တွေပေါများသည်ကိုလည်း ဂုဏ်ယူကြသည်ကို မြင်မိသည်။ ထိုပွဲလမ်းသဘင်များမှ ဘာအကျိုးအမြတ်များ ရကြပါလေသနည်း? ကိုရင်ရှူံးအမြင်ဖြင့်မူ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်ပိုများသည်။ နိုင်ငံ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျသည်။ ငွေကြေးများ သုံးစွဲကြသဖြင့် ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းဖြစ်သည်။ အစရှိသည်ဖြင့် အများကြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ လိုရင်းကိုဆက်ပါမည်။ လက်ရှိဘ၀တွင် ကောင်းအောင်နေကြသူများအဖို့ မြန်မာပြည်သူ/သားများ ယုံကြည်နေကြသည့်အတိုင်း သေလျင် ကိုယ့်နောက် ဒါပဲပါတာဆိုကာ လုပ်ယူနေကြသလိုဖြစ်သည်။ နောင်ဘယ်သူမှန်းမသိသည့် သူကြီးတစ်ယောက်အတွက် လက်ရှိဘ၀တွင် ပါရမီဖြည့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသမျှသည် ယခင်ဘ၀က ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိလူကြီးကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ ကိုယ့်ကျောကိုယ်လက်နဲ့သပ်ပြီး ရောင့်ရဲသည်ဆိုတာ ပျင်းနေကြပြန်သည်။ ကိုယ့်ထက်သာသွားသူများကိုလည်း သူက အတိတ်ကံကောင်းခဲ့တာပဲလေဟုဆိုကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေသိမ့်နေကြပြန်သေးသည်။
ဆိုတော့… လိုရင်းပြောပါမည်။ ထို “ကံ” ဆိုတာကြီးကို ကိုရင်ရှူံးအတော်မုန်းသည်။ ယခုအချိန်ထိ ကိုရင်ရှူံးဖြစ်တည်နေရခြင်းများတွင် ထိုအရာကြီးကြောင့်မပါပဲ ကိုယ်လုပ်သမျှသာ ကိုယ်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ပါတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း ဝေ့၀ဲကြည့်လိုက်လျင် လုပ်သလောက်သာ ဖြစ်နေကြခြင်းကို မြင်မိသည်။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလျင် ယခုနိုင်ငံသို့ မြန်မာလူမျိုး ၇၀ ကျော်မျှ တစ်သုတ်တည်းရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောက်ကာစက ဘယ်သူမှ ရာထူးမတိုးနိုင်ပါဘူးလေ၊ ရာထူးဆိုတာ အာရပ်တွေအတွက်သီးသန့်ပါပဲ၊ ကံပေးလျင် နေရာကောင်းလေး ရနိုင်တာပေါ့ဟု လူတိုင်းနီးပါးပြောကြသည်။ ကိုရင်ရှူံးအတွက် စိန်ခေါ်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ကံ ဆိုတာကြီးပါလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကြိုးစားသည်။ သူများတွေ တစ်ရက် ၉ နာရီအလုပ်လုပ်၊ ရတာလေးတွေ သုံးဖြုန်းနေချိန်တွင် ကိုရင်ရှူံးတစ်ရက်အနည်းဆုံး ၁၂ နာရီမျှ အလုပ်လုပ်သည်။ သင်ယူလေ့လာသည်။ ပိတ်ရက်မယူပဲ အလုပ်တွင်သာ အချိန်ကုန်ဆုံးစေသည်။ ၆ လကျော်ခန့်ကြာသောအခါ ရာထူးတစ်ဆင့်တိုးသည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် နောက်တစ်နေရာ ရာထူးတိုးသည်။ ထိုမျှရောက်သော်လည်း ကိုရင်ရှူံးလက်ရှိတိုင်အောင် နောက်တစ်နေရာအတွက် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကိုရင်ရှူံးပေါက်မြောက်သွားသည်ကို ကျန်သူများမှ ပြောကြသည်မှာ ကံကောင်းလို့ပါကွာ ဟုဆိုကြသဖြင့် ရယ်ချင်ကြသေးသည်။ ထိုသူများမှာကား ကံ ဆိုတာချည်းကို စောင့်နေရင်းနှင့် ဒုံရင်းသာဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေသွေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုရင်ရှူံး ၁၆ နှစ်သား အိမ်မှစွန့်ခွာလာစဉ်မှ ယခုတိုင်အောင် ဖြစ်တည်နေရခြင်းများကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားလိုက်လျင် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရခြင်းသာဟု မြင်မိသည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ကိုယ်ရည်မှန်းထားသလောက်သာ ကိုယ်ဖြစ်သည်ဟု သိမြင်လာသည့်အတွက် ယခုတစ်ဖန် ကိုရင်ရှူံး ကြီးကြီးမားမား ရည်မှန်းထားကြည့်သည်။ လုပ်လဲလုပ်နေ၏။ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလဲ ဖြစ်လာပါ၏။
ထို “ကံ” ဆိုတာကြီးသည်ကား ကိုရင်ရှူံးနား ယောင်လို့ပင် မသီတော့ပေ။ ကိုရင်ရှူံး အလုပ်လုပ်လျင် ပိုက်ဆံရ၏။ ကြိုးစားလျင် အောင်မြင်၏။ အိမ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေလျင် မည်သည့်ပိုက်ဆံမျှ မ၀င်။
မသေခင် ရွှေထီးဆောင်းရမယ်ဆိုလို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ “ကံ” ကိုအားကိုးနေလို့
စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ နဲ့ သေခါနီး ဘုရင်နဲ့ တွေ့။ သနားပါတယ်ကွာ ထီးလေးသွား
မိုးပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးလို “ကံ” တခုထဲအားထားနေလို့ကတော့
ဒီစာဟာ ညာဏ်ရှိသရွေ့၊ ဝိရီယစိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင်ရမယ် လို့
တနည်းအားဖြင့် ညာဏ်နှင့်ယှဉ်သော ဝိရီယအား ကို ဆိုလိုတယ်လို့ ယူဆလို့သဘောတူတယ်။
ဥပမာ ။ ကိုရင်ရှုံးလို လူ ၂ ယောက်ပြိုင်လုပ်မယ် ဆိုပါတော့။
ဟိုလူ ကို ဘယ်လိုဝေဖန်မလဲ။ အဲဒါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။
အဲဒါကိုတော့ ကျနော်က “စိတ်ရင်းစေတနာမှန်မမှန်” နဲ့
အကင်းပါးမှူ တွေလည်းလိုတယ်လို့ ထပ်မြင်မိတယ်။
သူက ညာဏ်ရိုးရိုးထက် “ချိန်ဆ”မှူ အားလိုတယ်။
ကျနော့လက်တွေ့ ဘဝကရတဲ့ အမြင်ပါ။
သေသေချာချာ ပိုင်းခြားပြထားပေးတဲ့ ဆရာသစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အဲလောက်ကြီးထိ ကျွန်တော်လဲ မပြောတတ်လို့ပါ…
လူနှစ်ယောက် ပြိုင်လုပ်လို့ တစ်ယောက်အောင်မြင်တယ်၊ တစ်ယောက်မအောင်မြင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယလို့ မြန်မာတွေဆိုကြတယ်မလား… ဥာဏ်သာပေမယ့် ၀ီရိယမသာရင်၊ ၀ီရိယသာပေမယ့် ဥာဏ်မသာရင်၊ နောက်တစ်မျိုး ဥာဏ်ရော၊ ၀ီရိယရော သာနေပါလျက်နဲ့ ပါးနပ်မှု မရှိရင် မအောင်မြင်တာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်… ဆရာသစ်ပြောတဲ့ ချိန်ဆမှုလဲပါသလို သူများနဲ့မတူတဲ့ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မှုကလဲ ကိုယ့်ကို သူများရှေ့ နှာတစ်ဖျားသာအောင် ဦးဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း..
နားလည်လွယ်ရအောင်… ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ နှိုင်းရေးဖွင့်ပြသွားတဲ့အတွက်… သာဓုပါ… ကိုရင်စိုင်းရေ….
ကိုရင်စိုင်းမုန်းတဲ့.. “ကံ” ဆိုတာကြီးကို.. မြန်မာတွေအများစု စွန့်နိုင်တဲ့နေ့ဟာ.. မြန်မာပြည်တိုးတက်တဲ့နေ့ပါပဲ..။
အဲဒီကံကိုအဖွင့်မှားတာကြီးကြောင့်ပဲ.. မြန်မာ့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရကို.. ကမ္ဘာလူသားအများစုက.. နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်..။
လူတွေစွန့်ခွာခဲ့ကြတယ်..။ ယူအက်စ်မှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘ၂ပါးကမွေးတဲ့.. အမေရိကန်ကလေးအားလုံးလိုလို… အရွယ်ရောက်ရင်.. မြန်မာ့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုစွန့်ကြပါတယ်..။
ကံ..စိတ်..ဥတု.. အဟာရ.. တဲ့..
ရှေ/့နောက်ဘ၀.. ကံ။၀ဋ်ဆိုတဲ့.. အယူကိုယူထားကြစေဦး… အရာရာကိုပြောင်းလဲစေဖို့..ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးတာ.. “ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အဟာရ” လေးပါးပါတဲ့…။
မြင်ယောင်နေပါသေးတယ်… မကြာခင်မှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်များ စာအုပ်ထူထူကြီးတွေနဲ့ ၀င်ကိုင်ပေါက်မှာ၊ ပုဆိုးချုံကြားက လက်သီးပုန်းထုတ်ပြသူများရဲ့ အနီရောင်ပန်းခင်းအနေနဲ့ ၀ိုင်းအားပေးကြမှာ…
ကျွန်တော်ကတော့ ပစ္စုပါန်ကိုပဲ တည့်တည့်ရှုပါတယ်၊ အမှားပိုကင်းပြီး လုပ်စရာရှိတာ ပိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတယ်ထင်မိပါတယ်… အဲဒီ ၄ ပုံထဲက တစ်ပုံကို ပါယ်ထားတာ ပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ ရဲရဲကြီး ပြောရဲပါကြောင်း..
မဟုတ်ရင် သူက ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့… လုပ်လို့ဖြစ်လာရင် သူ့ကြောင့်ပဲဖြစ်လာသလိုလို
ဆိုးတာတွေဖြစ်လာရင်လဲ အရင်တုန်းက ဘုမသိ၊ဘမသိသူကြီးကြောင့် ဖြစ်လာရတာဆိုကြောင်းကို မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ ပြန်ပြန် ရှင်းပြနေသေးတယ်…
အစက တင်အုံးမလို့ပဲ … ကွန်ဇာဗေးတစ်ပါတီကို ကြောက်လို့ မတင်ဖြစ်တော့တာ…
အဘဖောရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပိုစ့် ဖတ်ပြီး HR firm တခုရဲ့
analysis ကို ရှာတွေ့ပြီး သကာလ .. ဟီဟိ ….bad luck ဆိုတာ
ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း ရဲ့ အကြောင်းရင်းခံအချက်တွေထဲက အချက် ပိစိကွေးလေး
တချက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ပြီးသကာလ
အဲ့ ပိစိကွေးလေးကို အာကြီးကြီး လုပ် ရှေ့တန်းတင် ဒါကြီးကြောင့် အဓိက ပါလို့
ဒက်ဖနေးရှင်း ထုတ်နေသမျှ …. အင်း ..ဟင်းးဟင်းးး….
သဂျီးပြောတဲ့ အနှစ် ၁၀၀၀ ကျိန်စာ…
ကိုဂီတို့ရေးလိုက်ပုံများ ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော ဆိုသလိုပဲ
အဲဒီပါတီကြီးက မြန်မာလူမျိုးတွေရင်ထဲမှာ အနိုင်ရပါတီဆိုတာ တွေးမိပြီး တော်တော်လေးရယ်(ရီ)မိပါတယ်.. အဲဒီသုသေသန စာတမ်းကြီးကို ရဲရဲကြီးတင်လိုက်စမ်းပါဗျာ.. ကျွန်တော်က အဲလောက်လေ့လာအားမရှိလို့.. အမှန်အတိုင်းဆို ဒီထက်မကပြောချင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်.. စာရေးရတယ်ဆိုတာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာ.. ကိုယ်သိသလောက်၊ သေချာခိုင်မာတာတွေပဲ ပြောပြဖြစ်တယ်..
ဆွဲလိုက်စမ်းပါ.. တစ်ပုဒ်လောက်.. ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာကို ခံစားလို့ရတာပေါ့
အဲ့မှာပဲ သွားဖတ်လိုက်ပါတော့ …
သိတယ်မလား …ဆင်းရဲမွဲတေမှုအကြောင်း စကားစပ်ရင်း စပ်ရင်းနဲ့
အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတမ်း ပြဿနာဘက် ရောက်ကုန်လို့
ရွာဆူကုန်ရင် ရွာမီးတိုက်ခံရရင်….နိနဲ့ဝ ကြောင့် ဖြစ်ကုန်အုံးမယ်…
ကျွန်တော့်ကိုလည်း နည်းနည်း ၀င်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ…။
ကံကတော့ အနည်းငယ် ပါသေးတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်…(ထင်မိတာပါနော်)
မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးခြယ်ခွင့်မရှိတဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ကစတယ်လို့ထင်ပါတယ်…။
အဖေဆရာဝန် အမေဆရာဝန် ဆိုတဲ့ မိဘကို ရရှိခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ဘ၀နဲ့…
အဖေဆိုက်ကားဆရာ အမေပဲပြုတ်သည် ဆိုတဲ့ မိဘကို ရရှိခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ဘ၀…
ဆိုတော့ အဲဒီလို ကိစ္စလေးတွေ ကွာခြားမှုက…
ကလေး ၂ ယောက်ကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ ကွာခြားမှုကြီး ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်…။
ကျွန်တော့်အထင် အဲဒါကိုပဲ ကံလို့ ခေါ်နိုင်မလားလို့ ပါ ဗျာ…။
ဘ ဘလက်ရေ.. ထူးထူးခြားခြား ၀င်ဆွေးနွေးလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဦးစွာပြောပါရစေ
ဆိုတော့ကာ ဘ ဘလက်ပြောတဲ့ တာထွက်ပုံ ကွာပုံလေးပေါ့.. ဆိုင်ကောင်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်.. ဆေးပညာအရ ကြည့်မယ်ဆို ဒါက ကံ ဆိုတဲ့ သတ္တာဝါကြီးနဲ့ လားလားမျှမဆိုင်ပါ.. အဖိုမျိုးကောင်က အမမျိုးဥကို အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းသပ်သပ်ပါ။ ဆိုတော့… အဖေဆိုက်ကားဆရာက အမေဆရာဝန်ကို မိဘဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တာမျိုး၊ အမေပဲပြုတ်သည်က အဖေ ဆရာဝန်ကို ဖခင်ဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တာမျိုးဆိုရင်ကော? ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်သလဲ?
ဆိုတော့ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူသားတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်၊ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ရှိပါတယ်… ဒီတော့ပြောကြဦးမယ်… ကလေးဆိုတာ ရွှံ့လိုပဲ၊ ငယ်ဘ၀မှာ လိုသလို ပုံသွင်းလို့ရတယ်လို့… တစ်ကယ်တော့ လူတစ်ယောက် သူရှင်သန်ရာဘ၀ကို ကြည့်မြင်ခြင်းပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်… ဘယ်သူ့သားသမီးဖြစ်နေနေ၊ ဘယ်လိုပဲ တာထွက်ပါစေ… မွေးဖွားရာမှ သေဆုံးသည့်တိုင်အောင် သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေပဲ ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာပါ…
ပြောရမယ်ဆို ခု အမေဒစ်ကန် ပြန်ထောင်စုကိုပဲကြည့်… သူကြီးအထင်တစ်ကြီးပြောနေသမျှ.. သမ္မတသက်တမ်း နှစ်နှစ်တိုင်အောင် အသားမည်းတစ်ယောက်က အုပ်ချုပ်နေတာပဲမလား… ဂလိုဆို သူမွေးလာခဲ့တုန်းက တာထွက်မကောင်းခဲ့လို့ ပန်းဝင်ချိန် ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့ လူတွေတွေးခဲ့ကြမယ်၊ သူကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုယ်သူ လူမည်းတစ်ယောက်လို့ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်၊ အဲလိုခံယူခဲ့မယ်ဆို ခုချိန်မှာ ဗမာကို ကမ္ဘာသိစေရမဟဲ့ဟု လူတွေ အားပါးတရ ကျွေးကျော်စရာဖြစ်စေမယ့် အို… ဘားမား ဆိုပြီးဖြစ်လာမလား?
ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ အဲဒီ “ကံ” ဆိုတာကြီးကို သောက်ဂရုမစိုက်ရင် သူလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ခြင်းမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လို့ မရခြင်းဟု မြင်မိကြောင်းပါ။ မြန်မာပြည်သူများ ညောင်ပင်စောင့် တစ္ဆေကို ရုက္ခစိုး ဟု ကိုးကွယ်ပြီးလည်းကောင်း၊ အစိမ်းသေများကို ဘိုးတော်ကြီးများဟု ကိုးကွယ်ပြီးလည်းကောင်း ကိုယ်လုပ်သမျှ သူစောင်မ ကြည့်ရှူလို့ဆိုပြီး ဘာအလုပ်မှမလုပ်၊ နတ်အခြောက်ကတော်များ တောင်းသမျှ ပေးစားပြီး အချောင်ရလိုနေခြင်းများကို အားမလို အားမရဖြစ်မိပါကြောင်း…
ခံစားချက်နည်းနည်းပြင်းသွားတယ်… နောက်မန့်သမျှကို အိပ်ယာနိုးမှ အကြောင်းပြန်နိုင်ပါ့မည်ဆိုတဲ့အကြောင်း…
ကံတွေနဲ့ကန်နေလိုက်ကြတာ…
ဦး blackchaw ရဲ့ comment ကိုဖတ်ပြီး အတွေးတစ်ခုဝင်လာလို့ ။
ဆိုပါစို့ …လူသားနှစ်ယောက် တစ်ချိန်တည်းလောက်မှာ လူ့ လောကကိုရောက်လာတယ်။
တစ်ဦးသောလူသားအသစ်ရဲ့ အဖေက ဆရာဝန် ချမ်းသာသောဖေဖေ…
တစ်ဦးသောလူသားအသစ်ရဲ့ အဖေက ဆိုက်ကားဆရာ တစ်နေ့ လုပ်တစ်နေ့ စားသာမန်လူတန်းစား..
လူသားနှစ်ဦး လူဖြစ်လာကြတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ ။ ဖြစ်ပုံခြင်းက ကွဲ နေတယ်…
ဒါ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သူတို့ ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် လား…..?
ကျနော်ကတော့ကံဆိုတဲ့ အရာကြီးကို ကျောပိုးအိတ်ထည့် ပိုးထားပြီး တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ဖွင့် ကြည့် 
ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ တဲ့ လူတစ်ယောက်မို့ မေးကြည့် လိုက်တာပါ။
လော့စ်ကျလိကျလိအိမ်က.. ကျုပ်အိမ်ရှေ့မှာ.. စာကလေးတကောင်နားနေတယ်..
နေပြည်တော်က.. သမ္မတအိမ်ရှေ့မှာလည်း.. စာကလေးတကောင်နားနေတယ်..
ငှက်နားကြတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ ။နေရာက ကွဲ နေတယ်…
Chaos theory ခေးအော့သီအိုရီပြန်ပြောရမယ်…
လွန်ခဲ့တဲ့.. အနှစ်၁၀၀က .ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့.. နေ့လည် ၁၂နာရီ ၆မိနစ်.. ၃စက္ကန့်မှာ… ပစိဖစ်သမုဒ္ဒရာရဲ့.. တနေရာမှာ.. ဝေလငါးတကောင်.. ရေပေါ်တက်.. လေမှုတ်အသက်ရှုခဲ့တယ်..
အဲဒီအကျိုးအကြောင်းတရားကြောင့်.. ၂၀၁၂ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့လည် ၁၂နာရီတိတိမှာ.. အယ်အေနဲ့နေပြည်တော်.. ၂နေရာမှာ ငှက်အမျိုးအစားတူ ၂ကောင်နားတာဖြစ်လာခဲ့တယ်..
အလွန့်အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့.. စကြ၀ဌာကြီးမှာ.. တပိုင်းတစ..တခုအနေနဲ့.. ပါဝင်သက်ရောက်နေတယ်..
“ယေဓမ္မာဟေ တုပ္ပဘဝါ ..” အကြင်ဖြစ်ရပ်တိုင်း၌ အကြောင်းခံတရားရှိသည် … ကို.. ဖြတ်ယူသုံးမယ်..။
ပုံမှာ.. အနားစွန်းတွေမှာ.. အနားစွန်းလေးတွေ.. ထပ်တူ.. မဆုံးနိုင်အောင် ထပ်တူရှိပါတယ်..
မာလုကျပုတ္တ လောကသည်မြဲ၏ဟု ငါမဟောကြား၊ လောကသည် မမြဲဟု ငါမဟောကြား၊ လောကသည် အဆုံးရှိ၏ဟုငါမဟောကြား၊ လောကသည် အဆုံးမရှိဟု ငါမဟောကြား၊ ထိုအသက်သည်ပင် ထိုကိုယ်တည်းဟုငါမဟောကြား၊ အသက် သည်တခြား ကိုယ်သည်တခြားဟု ငါ မဟောကြား၊ သတ္တဝါသည်သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်၏ဟု ငါ မဟောကြား၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ မဖြစ်ဟုငါမဟောကြား၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်း ဖြစ်၏၊ ဖြစ်လည်း မဖြစ်ဟုငါမဟောကြား၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ဟုငါမဟောကြား။
အို ကိုရှုံး ။ သိပ်မတွေးပါနဲ့လေ။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဉာဏ်နဲ့ ဝီရီယလေး ရှေ့ထားပြီးလုပ်။
ပျင်းတဲ့ ကိစ္စဆို ကံကိုသာ ပုံချလိုက်တော့။ အေးရောပဲ။ :harr:
အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးအောင်မြင်နေသူများ က ငါကံကောင်းလို့အောင်မြင်တာလို့ဘယ်သူမှပြောမယ်
မထင်ပါ..။မအောင်မြင်တဲ့သူများကသာ ဘာကြောင့်လို့မဖြေမရှာဘဲ ကံ ကိုသာအပြစ်ပုံ ကံ ဆိုတာကြီးကို
အကာကွယ်ယူပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီးမဝေဖန်ရဲဘူး…။ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ ကို ဘဲအားပြုတာထောက်ခံပါတယ်.။
ကံ ဆိုတာကမေ့ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ..။နောက်ပြီး နတ်၊ ဘိုးတော် တွေ မ တာမျှော်လင့် ဗေဒင်၊ယတြာ၊တွေကို ယုံစား…..အဓိက ကိုယ့်ကိုကိုယ်မယုံကြည်တာ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားမကိုးချင်တာ လို့ဘဲမြင်
တယ်….။ မြန်မာပြည်မှာ အရောင်းရဆုံး ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်း ဘာလဲဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု့အခြေအနေကို
ကိုဘက်လက်ချောရဲ့ comment ကိုနဲနဲထောက်ခံတယ်ဗျာ။ ကပ်သီးကပ်ဖဲ့ပြောတာတော့
မဟုတ်ပါဘူး ခုနကပြောတဲ့ အဖေဆိုက္ကားသမားအမေပဲပြုတ်သယ်က မွေးလာတဲ့ကလေးနဲ့
နှစ်ယောက်စလုံးက ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အမှတ်မှီကြတယ်ဗျာ အဲဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့သူက
ဆေးကျောင်း၇နှစ်စာတက်ဖို့မတက်နိုင်တော့သူဆရာဝန်မဖြစ်ဘူး ။ ချမ်းသာတဲ့သမားကတော့
သူဖြစ်ချင်ရာရွေးချယ်ခွင့်ရတယ်။ ဆင်းရဲကလေးလေးဆရာဝန်ဖြစ်ဘူးဆိုတာ သူဆရာဝန်ဖြစ်အောင်
မကြိုးစားတာလား ပိုက်ဆံမရှိလို့ ကံမရှိလို့ဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲရတာလား ။ ကံဆိုတာမအောင်မြင်တဲ့
ထင်တယ်ဗျာ ။ ကိုယ့်တွေ့ကိုပြောရရင် ညီမတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ GTC မှာ B.teach ကို Mechnical
Majarနဲ့တက်နေရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာ။ မိဘကဆင်းရဲတယ် နာရီပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး
တနေ့လုပ်မှတနေ့စားရတယ် ပြီးတော့အဖေကအိုနေပြီ မျက်လုံးကမကောင်းတော့နာရီဆိုင်က
ဆက်မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး အဲဒီတော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားက ကျောင်းထွက်ပြီး မိဘအိုဖအိုကို
ရရာအလုပ်လုပ်ပြီးလုပ်ကျွေးရတယ်။ အဆုံးသတ်က သူကျောင်းမပြီးဘူးအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်ခဲ့ဘူး
အဲဒါမျိုးတွေကျတော့ ဘယ်သူ့အပြစ်ပုံရမလဲ ……..
တကယ်တော့ … လူဒွေ လူဒွေ…
အောင်နိုင်သူများကတော့ ကိုယ်ကြိုးစားလို့ ….ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်..
မအောင်နိုင်သူများကတော့ ကံတရားမို့ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်..
သြော် နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နေကြတဲ့ ကာကွယ်ရေးသမား တွေပါလား ..
(ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်)
တစ်ခု စိတ်ဝင်စားတယ် ။
ကို ရှုံး လူကနေ စိုင်း ကွမ်းခေး နာမည်ပြောင်းတော့မှာလား ။
အဘ သဘောကတော့ ။
အတိတ် ကံ ကို လုံးလုံး စွန့်ပယ် / မယုံတာ မဟုတ်ဘူးကွယ့် ။
အတိတ် ကံ ကြောင့် တစ်ချို့အခြေအနေတွေမှာ ကွာခြားတာကို လက်ခံပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် ၊ ကိုယ်ပြုပြင်လို့မရတော့တဲ့ အတိတ် ကံ ကို လွမ်းမောနေမယ့်အစား ၊
လက်ရှိ ကိုယ်လုပ် / ကိုယ်ပြင် နိုင်တဲ့ ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကံ ကိုပဲ ၊
အားသွန် ခွန်စိုက် ဖိလုပ်ပြီး ၊ ဘဝ ကို တိုးတက်စေချင်တာပါ ။
ဟိုးတုန်းက ရွာထဲမှာ မန့် ခဲ့ဖူးတဲ့ ၊ ဆရာတာရာမင်းဝေ ရဲ့ စာအုပ်ထဲက စကား
““ ထိုင်နေရင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားတာကတော့ ကြက်မတွေပဲ ရှိတယ် ”” တဲ့ အဲဒီလို… အဲဒီလို
မိုချို ကတော့ အစွမ်း ကုန် အင်အား ၇ှိ သလောက် လဲကြိုး စား ခဲ့ သလို လက်ရှိ အခြေ အနေ မှာလည်း လူ တယောက် ရဲ့ ပြ ဌာန်း ပြီးသား ကံ တရား ကို လက် မခံ လို့ မရ တဲ့အနေ အထား ဆိုတော့ ပိုစ့် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မပြော လို တော့ ပါဘူး။
( ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့် မထားတဲ့ ၊ ဘယ်သူ ကမှ မလိုချင်တဲ့ ၊ အဲလို ဖြစ်လောက်စရာ ကိုယ့် ဘက်က အမှား ၊ ချို့ ယွင်း ချက် တစုံ တရာ မရှိ ခဲ့ ပါပဲ၊ သား အမိ ၂ ယောက် လုံး အတွက် အနာ ဂတ် ပျောက် သွား စေတဲ့ သား တစ် ယောက် ရလာ ခဲ့ တာ ကံ ကို လက် မခံ ရင် ဘာ ကို လက်ခံ ရ မလဲ။ ) အရင် တုန်း က ဆို ရင် ကိုယ် လုပ်ချင် တာ၊ ဖြစ်ချင် တာ မှန် သ မျှ ကိုယ် တိုင် လုပ် မှ ဖြစ် တယ် ဆိုတာ ကို အမြဲ ဆုပ် ကိုင် ထားတဲ့ သူ ပါ။ မပြော ပါဘူးဆို မှ ပြော မိသွား ပြန် ပြီ။
ဘယ် လို ဖြစ်ဖြစ် အခုတော့ အစ်မ တခါ မန့် ခဲ့ ဖူး သလို ကိုရင် ရှုံး နာမည် ကို ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့ …စိုင်း ကွမ်း ခေး ….ဆိုတော့ ကို ရင် စိုင်း ပေါ့ လေ။
အရာရာတိုင်းမှာ ခြွင်းချက်ရှိပါတယ် …
အလုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရတာမဟုတ်ပါဘူး … အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့လဲ ပိုက်ဆံရပါတယ် ..
ကျွန်မတို့ အိမ်ဘေးအိမ်က မိသားစုတစ်ခုလုံး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ကြဘူး။ ဘိုးဘွားလက်ထက်က ထားခဲ့တဲ့ အိမ်ကြီးကို ငှားစားတာ တစ်လ ဆယ်သိန်းရတယ် … အဲဒီအိမ်ငှားခနဲ့ ထိုင်စားနေတာကြာလှပြီ …
အန်တီဝေရေ… အဲလိုထိုင်စားနေနိုင်တာ ကံ ဆိုတာကြီးကြောင့်မဟုတ်ပဲ သူတို့ရှေ့ Generation တစ်ခုက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့လို့ဆိုတာ ငြင်းနိုင်ပါ့မလား? ခုသူတို့ထိုင်စားနေနိုင်တာကို အားကျမနေပဲ နောင်မှာ သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာပဲ စောင့်ကြည့်စေလိုပါတယ်… ပွဲက ဒီမှာတင် မပြီးနိုင်သေးပါကြောင်း
အစကတော့ မပြောတော့ဘူးလို့ပဲ ။ ဒါပေမဲ့ နာမည်ပြောင်း အမှတ်တရအနေနဲ့ ၀င်လျှောက်ပြောလိုက်အုန်းမယ်။
အခု နာမည်ကောင်းသားပဲ ။
ကျမ ကြီးမေ ( အမေ့ အမအကြီးဆုံး) မှာ သမီး စုန်းပြူးတယောက်ပါတယ်။ ကျမ အမ ၀မ်းကွဲပေါ့ ။အခု အသက် ၃၄ ကျော် ၃၅ နှစ် ရှိပြီ ။ သူ့ဘ၀မှာ အလုပ်ဆိုတာ တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး ။ ပိုက်ဆံမရှာဖူးဘူး။ ဟင်းချက်ဖူးတာက သူ့ရဲ့ အပင်ပန်းဆုံး အလုပ်ပေါ့။
ဘွဲ့ရတော့ ကျမဆိုင်ကို လိုက်ထိုင်ပေးဖူးတယ် ။ ဒီလောက်ပါပဲ။ သူအိမ်ထောင်ကျတော့ သူ့ယောကျာ်း ( ကျောင်းနေဖက်) က ဖသုံးလုံးထဲက မထွက်ဖူး ။ လောင်းကစားဆိုတာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲလုပ်တာ ။ ၁ လုံး ၂ လုံး ၃ လုံး ။ သူလည်းခုချိန်ထိ အလုပ်မလုပ်ဖူးဘူး။
နှစ်ဖက်မိဘက ကြည့်ထားတာပေါ့လေ။ ဒီလိုနဲ့ သားတယောက်မွေးပါလေရော။ ကလေးက သိပ်ဥာဏ်ကောင်းတယ် ။ ချစ်မွှေးလည်းပါတယ်။ မိဘက အသုံးမကျသလောက် ကလေးက ရုပ်ချောပြီး လိမ္မာတယ် ။ အကင်းပါးတယ်။ စာတော်တယ်။
သူတို့ လင်မယား ဒီလိုနဲ့ ကွဲပါလေရော ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်က ပြန်ပေါင်းထုတ်လေရဲ့ ။
နှစ်ဖက်မိဘက အမွေပေးလိုက်တယ် ။ အမက ခြံ ၀င်းနဲ့ အိမ်နဲ့ ကားတစ်စီး ။ သူ့ယောက်ျား ဘက်က အမွေရတဲ့ ပိုက်ဆံကို ( သိန်းထောင်ချီပါတယ် ) ဘဏ်အပ်ပြီး ဘဏ်တိုးနဲ့ စားတာ တလ ကို ဆယ်သိန်းအထက်မှာ ရတယ်။ အသားတင်နော် ။ တခြားမပါသေးဘူး။
ခုသူ့ယောက်ျားက အရက်ပါပြတ်ပြီး လောင်းကစားပါ ဖြတ်လိုက်ပြီ ။ အသဲအသန်သေလုနီးပါး နေမကောင်းဖြစ်လိုက်တယ် ပြောတယ်။ လက်ငုတ်လက်ရင်းသင်္ကန်းဆိုင်ကို ပြန်လုပ်နေလေရဲ့ ။
တဘ၀လုံး မိဘမျက်ရည်ပေါက် ကြီးငယ်ကြအောင် လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သူနှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် ခုချိန်မှာ အေးဆေးလို့ သူတို့ မဟုတ်ခဲ့ကြသလိုပဲ ။
ယောက်ျားရကံကောင်းတဲ့ လိမ္မာရေးခြား ရှိလှတဲ့ သူ့အမကြီးကတော့ အမွေရတာချင်း အတူတူ လုပ်ရင်းနဲ့ နစ်နေလို့ ဖတ်သီဖတ်သီနဲ့ ဘ၀ကြီးကို ၄၀ ကျော်မှ ကပြောင်းကပြန်ရင်ဆိုင်နေလေရဲ့။ ပြီးတော့လည်း တော်လှတဲ့ ယောက်ျား မြင်းစီးထွက်လေရဲ့ ။
စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေဖြစ်လွန်းလို့ သူ့မြင်ရတဲ့သူတွေကို ရင်ထဲ မချိလှဘူး ။
အော် ကံ ကံ
I strongly agree with the writer that fate or destiny or luck or kamma whatever we call it matters only very little % in deciding our current situation. As far as I understand, Lord Buddha mentioned that there were four major things influencing something to happen and they are (pardon my English and Pali as they are far from correct): known as four adipati or four governing factors in Dhamma,
-Sanda dipati ( Desire the governing factor )
Ifaperson hasavery ultimate and strong desire to achieve something, he will become accomplished it regardless of how much difficult to achieve it.
-Seita dipati ( The mind the governing factor )
Ifaperson hasastrong and unstoppable mind decided to do something, he or she will get it done notwithstanding the difficulties.
-Wiriya dipati ( the diligence the governing factor )
Ifaperson is determined and has diligence to overcome any hardship to achieve his/her goal, finally he/she will be successful.
-Panyar Dipati ( The wisdom the government factor)
Ifaperson has great wisdom, he or she will be succeeded in whatever he / she tries to accomplished.
In fact, we buddhists wrongly interpret what Buddha taught and we may find that Buddhism is one of the rare religions in the world that encourages and recognizes the efforts and wisdom of mankind and Buddhism cannot be referred to asareligion that blame the past kamma alone for what is going on currently and in fact it is quite contrary. I would like to apologize all readers as my comments may not be good enough and would invite any villagers to make it more understandable.
ဒီလိုပဲ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာတစ်ခုကို လူအများကြား ရဲရဲဝန့်ဝန့် ချမပြရဲ၊ မဆွေးနွေးရဲတာ မြန်မာ့လူနေမှုစနစ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို ငယ်ငယ်က သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ သင်ကြားရေးစနစ်ကြောင့်လဲ အမြုံတွေဘ၀လို ဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်..
ဘာသာရေးအကြောင်းကတော့ ကိုယ်တိုင် မလေ့လာ မလိုက်စားဖူးလို့ ဘာမှ မသိပါ။ ဒါပေမယ့် Reign ရှင်းပြသွားတဲ့ အချက်တွေကတော့ Universal Truth တွေဖြစ်ကြောင်း လက်ခံကြောင်းပါ..
ဖတ်ရတာ… တွေးတောစရာအပြည့်နဲ့ …
ကံ ဉဏ် ဝိရိယ ဆိုတာကတော့
နားလည်နိုင်တဲ့ ”ကံ” ဆိုတာဂျီးပါမလာတော့ဘယ်နားလည်နိုင်မလဲနော် ကန် ……. ပေါ့
ကျုပ်တို့ ဇာတိရွာက ရွာသားတွေ
တော်တော် ဂွတီးဂွကျနိုင်တယ်လို့ အောက်မေ့နေတာ ..
ကိုရှုံးကလည်း နင်လား ငါလားပဲကိုးဗျ …
ဒါပေမယ့် သာသနာကိုတော့ ဘာတုန်း ညာတုန်း သွားလုပ်ရဲဘူး …
ရွာဦးကျောင်းက ဘုန်းကြီးကို ကြောက်လို့ …
တစ်ခါတစ်လေ ကြောက်တတ်ခြင်းဟာလည်း စည်းကမ်းကို ပိုရှိစေတယ်ဆိုလားပဲ …
ဇာတ်ကားတစ်ကားထဲမှာ ပါတာ ….
“ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတယ်” ဆိုတဲ့
အကြောင်း အကျိုး ဆက်စပ်မှုကို လက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိနေပါလျက်နဲ့ …
“ကံ” ဆိုတာ အတွက်နဲ့ ကိုးကွယ်ရာကို စွန့်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုတော့ဖြင့်
တွေးမရဘူး ဖြစ်နေတယ် ….
မင်းရဲ့ ငယ်ဘဝ အကြောင်းဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုလို မပျက်မစီး အောင်မြင်တဲ့ ဘဝ ကို ရောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
သားသမီး တွေကို ဒီလို တဖက်စောင်းနင်း ဆက်ဆံတဲ့ မိဘတွေလက်ထဲမှာ ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ အများကြီးရှိတာ။
မင်းမိဘတွေ ဖက်ကလဲ တစ်ချို့အချက်တွေ ရှေ့နေလိုက်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားဦးမယ်။
မိဘတွေအဖို့ သားဦး ဆိုတာကို တော့ ပိုချစ်ကြတာဟာ သဘာဝ ပါဘဲ။
အရီးလဲ အလတ်ပါ။ သားဦးမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုရှုံး ရဲ့ မိဘတွေ ကိုလဲ သမီးကြီးကို ပိုချစ်တာ အပြစ်မတင်လိုပေမဲ့ ဒီကလေးကိုတော့ ပညာဆက်သင်ပေးမယ်။
ဒီကလေးကတော့ ကျောင်းထွက် ဆိုတာကတော့ မှားတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(မင်စကား အရ မင်းဘက်က ကြည့်ပြောရင်ပေါ့လေ)
မင်းရဲ့ ဇာတ်လမ်း ကနေ အတွေးတွေ ပေါ်လာတာလေးကို ဆက်ချင်ပြီပါသေးတယ်။
မနာလို ဝန်တို မစ္ဆရိယ ဆိုတဲ့စကား လေးအကြောင်းပေါ့။
ဝန်တိုခြင်း ဆိုတာ evolution theory အရ ဗီဇ အနေနဲ့ ပါမှ ကိုယ့်မျိုးဆက် က ဆက်လက်ရှင်သန် မှာလို့ ဆိုတာမို့ လူတိုင်းမှာ အဲဒီ ဗီဇပါဖို့များမှာပါ။
အားလုံးလို့တော့ မပြော နိုင်ပါဘူး။
ဒီစကားကိုဆက် ပြောရင် ဗီဇ တွေ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်တွေ နဲ့ တိုင်ပတ်ဦးမှာ သေချာတယ်။
ဒီတော့ လိုရင်းကို ပြောချင်တာက မြန်မာမှ မဟုတ်၊ အင်္ဂလိပ်မှမဟုတ်၊ ချမ်းသာသူမှမဟုတ်၊ ဆင်းရဲသူမှမဟုတ် ဝန်တို တဲ့ ဗီဇတွေရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေဟာ ဝန်တိုတယ်၊ သဘောထားသေးတယ်၊ အတွန်းအတိုက် လုပ်တတ်တယ် လို့ ဖြစ်နေတာလဲ??????
ကလေးဘဝ မှာတော့ မိဘ က သားသမီးတွေကြား အညီအမျှ မဆက်ဆံတာကြောင့်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ လူတွေအတွက် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု ဟာ အလွန်ရှားပါတယ်။
မညီမျှ တဲ့၊ အသုံးမကျ ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ မျက်နှာလိုက် မှုတွေ အရမ်းများ ပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာ ဒီလိုရှားပါးတဲ့ နေရာတစ်ခု အတွက် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်မှ မလုပ်ကြရင် ကိုယ်ဘဲ ကျန် ခဲ့မှာမဟုတ်လား။
မတရားသဖြင့် နဲ့ နေရာရတာတွေ အပေါ် သဘောထားကြီးဖို့ ခက်ပါမယ်။
ခပ်ရိုင်းရိုင်း ဥပမာ ဆိုရင် အစားဝဝ စားရတဲ့ ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေ ဆိုရင် ကိုယ့်ခွက်ထဲ အစာရဖို့ သေချာတော့ ကိုယ့်ခွက်ကိုယ်ဘဲ စားပါတယ်။
ဒီမှာလဲ လောဘရှိတဲ့ ကောင် ကတော့ စည်းဖောက်နိုင်ပါတယ်။
(ဒီမှာလဲ လောဘကြီးတတ်တဲ့ ဗီဇ ကရှိဦးမှာကိုး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ဗီဇက ရှင်မနေလဲ ကိုယ်က survive ဖြစ်တာမို့ အရေးကြီးတဲ့ ဗီဇ မဟုတ်လောက်ဘူး)
ဗိုက်ဝနေပြီးဖြစ်တဲ့ ကျန်အကောင်တွေကတော့ သူနဲ့ပြိုင်ပြီး ကိုက်မနေတော့ ဘဲ ဖယ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစာ မဝ တဲ့ ငတ်နေတဲ့ အကောင်တွေထဲ ကို အရိုးလေးတစ်ခု ကျတာနဲ့ အတင်းလုယက် ရမှာပါ။
မဟုတ်ရင် သူ့မှာအသက်ရှင်ဖို့ အခွင့် မရှိတော့ပါဘဲ။
လူတွေ တွေမှာရော ဘာထူးလဲ။
အများစုကတော့ ဘယ်သူမှ လုယက် နေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘတ်စကားပေါ် ကို တန်းစီ မတက်တာ ကိုယ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့ပါ။
ဒီကားမရလဲ နောက်တစ်ကားဆက်လာမယ် ဆိုတာသိရင် တော်ရုံ အများစု က တန်းစီ မှာပါ။
ဒီမှာတော့ ရှိတဲ့ resource က မမျှလို့ပါ။
ဒီတော့ မြန်မာတွေ တန်းမစီဘူးလို့ နှာခေါင်းရှုံ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ တန်းမစီတာ လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အရင်ရှာကြည့်ပါ။
သူများနိုင်ငံ မှာ တန်းစီ တယ် ဆိုတာက ကိုယ်တန်းစီတဲ့ အခွင့်အလမ်း ကိုရနိုင်ဖို့ resource တွေ ရှိနေတာ ကို သိလို့ပါ။
ဒီနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဆိုင်တွေမှာ လျှော့ဈေးချတဲ့ အချိန်တွေ ကို ကြည့်။ အသေအကြေတိုးဝှေ့ ကြတာပါဘဲ။ Sale ဆိုတာက အကန့်အသတ် နဲ့ကိုး။
ဒီတော့ လူတွေ ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝန်တိုတာတွေ များလာတာ ဆိုရင် အဲဒီ နိုင်ငံ ဟာ တစ်ခုခု မှာတော့ မှားနေပြီ။
သေချာတာကတော့ လူ့အရင်းအမြစ် ကို ဂရုစိုက်ရမဲ့ အပိုင်းမှာ မှားနေပြီ။
တာဝန်ရှိသူတွေ ဒါကိုမှ ဂရုမစိုက်ရင် “မကောင်းတဲ့ ဗီဇ” ကို “ပိုပြီး ဆိုးအောင် လုပ်မဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် တွေ” ကနေ ပိုပိုပြီး ဝန်တိုတတ်တဲ့ ၊ သဘောထားမပြည့်ဝတဲ့ မျိုးဆက်တွေ ကို လက်ဆင့်ကမ်းသွားမှာ အသေအချာပါဘဲ။
ကိုရှုံးရဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ သွေဖယ်ပြီး မဆိုင်တာတွေ ပြောနေလို့ ခေါင်းစဉ် မှန်အောင် အကြောင်းအရာ ရွှေ့လိုက်ရအောင်။
ဒီလူတွေ နဲ့ ဒီအတိုင်းဆက်သွားလို့ကတော့ ပိုဆိုးတဲ့ မျိုးဆက် ရတော့ မယ် လို့ သိနေကြ ပါရက်နဲ့
ဘယ်သူတွေ ကများ မြန်မာပြည်ထဲ မှာ လူလာပြီး ဖြစ်ချင်နေဦးမယ် မသိဘူးနော်။
လိုချင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ကို အရမ်းပံ့ပိုးပေးမဲ့ လိုချင်တဲ့မိဘဆီမှာ ဝင်လိုက်ရင် ပြီးရော။
ဒါဟာ ကိုယ့် ကံတရား ရဲ့ အစပါဘဲ ကိုရှုံးရယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီနောက်ကမှ မင်းက ဉာဏ်စွမ်း နဲ့ ဝီရိယစွမ်း ကို သုံးနိုင်ခဲ့တာမို့ ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝ ရောက်ရပါတယ်။
မဟုတ်ဘဲ ဉာဏ်စွမ်း နဲ့ ဝီရိယစွမ်း မပါခဲ့ရင် ဘယ်အောင်မြင်မလဲ။
ဒီတော့ ကိုယ့်ဖက်က လက်ရှိအခြေ အနေ မှာ ရသမျှ အခွင့်အရေး ကို အတင်းမရမကယူပြီး ကြိုးစားမှ အောင်မြင်မှာ အသေအချာ ဆိုတာကို မငြင်းပါဘူး။
တစ်ချို့ သူတွေဟာ အစကံ လဲ မကောင်းဘူး၊
ဉာဏ်စွမ်း နဲ့ ဝီရိယစွမ်း ကြိုးစားဖို့ အတွက်တောင် အခွင့်အလမ်းလဲ မရဘူး။
ဒီလို လူတွေ အတွက် တော့ ကံ ကိုဘဲ အပြစ်တင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
မဟုတ်ရင် သူတို့ မှာ ဘာမှ ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်နေပါ့မယ်။
ဒီစာတွေအစအဆုံးသေချာပြန်ဖတ်တော့.. ကံ ဆိုတာကို.. (အရောရောအထွေးထွေး).. ကိုယ့်နည်းနဲ့ကိုယ်.. အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြပုံပေါ်ပါတယ်..။( ကျုပ်ပါအပါအ၀င်ပေါ့)
ဘုရားဟောထားတဲ့.. ကံအမျိုးပေါင်း.. မြောက်များစွာထဲက.. ကိုယ်လိုချင်တာကို.. လိုသလိုယူသုံးနေကြတာလို့..မြင်မိတယ်..။
အရီးလတ်ပြောတာဖတ်မိပြီး.. မြန်မာတွေ.. (စာလုံးစကားမကြွယ်ဝလို့..) စကားလုံးကောင်းကင်ပြင်ကြီးမှာ.. .. ထောင်ချောက်ကျပိတ်မိနေကြတယ်လို့ယူဆလိုက်မိတော့တာပဲ..
ကျွန်မ လဲ မြန်မာ စစ်စစ် မို့ ဒီလိုဒီလို ဝေဝါးဝါး ပါဘဲ ဆိုတာ ဝန်ခံပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘာကိုမှ လက်တွေ့သက်သေပြလို့ မရတဲ့ ဟာကို ဘယ်သူက အမှန်လုပ်ပြီး သက်သေပြနိုင်မှာလဲ။
ဒီတော့ ကိုယ်ထင်သလို မှန်းပြီး ပုံဖော်ရင်း စိတ်ကိုမနိုင်ကြတော့တဲ့အချိန် စစ်ပွဲ တွေ အထိဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
အဲဒါကို မြဲခြင်းမှတ်နေကြတာ။ (ကျွန်မ အပါအဝင်ပါဘဲ)
မှန်ပါ့အရီးရေ.. ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးဆိုတာသိနေရင် အဲဒီအရာကြီးတစ်ခုကို ဘာလို့ ဆုပ်ကိုင်ထားနေကြသေးသလဲ… လွှတ်ချလိုက်ပြီး အပြောင်းအလဲလေးတစ်ခု ဖန်တီးကြည့်ကြရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလား?
အဲလိုပဲမြင်လို့ ခုလိုပို့စ်မျိုး ရေးကြည့်လိုက်ပါတယ်… အကျိုးဆက်တော့ တော်တော်လူေ-ာက်မြင် ကပ်ခံနေရကြောင်း
အတိတ်ကံ = အတိတ်အလုပ်= အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာ
အနာဂတ်ကံ =အနာဂတ်အလုပ် ။
ဒါဆို မွေးကတည်းက ဇာတိညံ့လို့ ပဲပြုတ်သည်မသားဖြစ်ရတာ ကံ မဟုတ်လားလို့
နောက်တမျိုးက ခုလုပ်တာဘဲ လုပ်တိုင်းလွဲနေတာ ကံ မဟုတ်လို့ဘာလဲလို့ပြောပြန်တယ်။
အဲဒီမှာ စလွဲပြီ အစ်မရေ
ကိုယ်မသိတဲ့ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ အနေအထားတခုကနေ ပဲပြုတ်သည်မ သားဖြစ်လာရလို့
ငါ ကံ မကောင်းပါလားလို့ တော်တော်များများသောလူတွေက “တွေးတော့” တာကိုး။
အဲဒီလိုတွေး တော့ကော ဘာဖြစ်လာမှာလဲ ဆိုတဲ့ အကျိုးဆက်ကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
စိတ်ဓာတ်အားငယ်သွားတာကလွဲလို့ လူ့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ အင်အားကျသွားစေတာကလွဲလို့
ကိုယ်နဲ့ အဆင့်တူပဲပြုတ်သည်မ သားထဲမှာ ကိုယ်ကပိုပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကို
ဘဝကို မြှင့်တင်နိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့ရမှာဘဲ။
နေ့တိုင်း အမဲလိုက်မှ စားရတဲ့ တောထဲကကျားတွေ၊တောကောင်တွေကိုအားနာပါအုန်းလို့ဆိုပါရစေ။
ကိုယ်ရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းမှားနေလို့။အယူအဆမှားနေလို့။ လုပ်ငန်းမကျွမ်းလို့။
အထာမသိလို့။အကင်းမပါးလို့။ “သတိ”မထားမိလို့ ဆိုတာတွေ ထဲ့မစဉ်းစားတော့ဘူး။
ကံ မကောင်းလို့ ဆိုပြီးဘဲ အော်ကြတော့တာပါဘဲ။။
ကျနော် ကံ နဲ့ ကံ၏ အကျိုးဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ “ဆင်ခြေ” အတွက်တော့ “ကံ” ကို အသုံးချတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။
ကံ ကို ဆင်ခြေ ပေးနေသမျှ ညံ့မြဲညံ့ ရှုံးမြဲရှုံး နေအုန်းမှာပါ.။
ကံ ဆိုတာကို ခဏလေး မေ့ထားပြီး ငါဘယ်နေရာမှာ အားနည်းနေလို့
လုပ်တိုင်းမဖြစ်ရတာလဲလို့ ပြန်သုံးသပ် ပြန်ပြုပြင် ပြန်ကြိုးစား ဘို့ အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။
ကံ ဆိုတာကြီးကို ဆင်ခြေ နေရာမှာ သုံးနေကြလို့ ကံ ဆိုတဲ့ အရာကလဲ တော်တော်လေး
ဆင်ခြေ နဲ့ ကံ ခွဲခြား အမှန် သိနိုင်ကြပါစေလို့။
ခုလေးတင် ကိုဗိုက်ဆီမှာ အဲဒီအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် နားလည်သလောက် ပြောပြီးသွားပါပြီ… ကျွန်တော်ပြောချင်တာကို ပိုရှင်းလင်းသွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်…. ကြောင်း
ဟုတ်ပါတယ် ကိုသစ် ကျမလည်း ကံကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ပေမဲ့ ကံကို ပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး ဆင်ခြေပေးတတ်တာကိုတော့ လက်မခံပါဘူး။ ကိုယ်လည်း တတ်နိုင်တာကို စွမ်းသရွေ့ ကြိုးစားကြည့်ရမှာပါ။
ကံအကြောင်းကို ကိုယ်သန်ရာဖွဲ့ကြရင်လည်း ဒီတသက် ပြီးနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
မောင်ရှုံးပြောတဲ့ လူထီးနဲ့လူမ စပ်လို့ လူလေးပေါက်လာတယ်ဆိုတာ ရုပ်ဝါဒီအများသုံးကြတယ်။ သို့ပေမဲ့ အဲဒီလူထီးနဲ့လူမ တွေ့ဆုံဖို့ လူထီးလူမရယ်လို့ ရှင်သန်လာဖို့ ခိုင်မြဲကြဖို့ သူတို့နှစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ မရေတွက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းများစွာ ရှိနေတယ်လေကွယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ အမြင်မမှားဖို့ စိတ်ရှင်းနိုင်ဖို့ ကံဆိုတဲ့ အကြောင်းကို လက်ခံခိုင်းတာ။ အလွဲသုံးတာကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိစမြဲပဲ။ မမြင်ရတဲ့ ကံကလွှတ်ချပြီး ပစ္စုပ္ပန်လက်ခံသူများကြတော့လည်း တဘဝစာကြည့် ငါ့ဖို့လုပ်နေတဲ့ အယူမှားတွေလည်း ရှိရတာပဲ။ သူများအနေအထိုင် မတတ်တာနဲ့ သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေကွယ်။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားဆိုပေမဲ့ အဲလိုစားနိုင်ဖို့ ကိုယ်လက်ရှိရမယ်၊ စားစရာရှိရမယ်၊ စားဖို့တတ်နိုင်ရမယ်၊ စားရကောင်းမှန်း သိရမယ်၊ စားဖို့အခြေအနေ ပေးရမယ်။ အဲဒီစားစရာဆိုတာလည်း ဗျုန်းဆိုပေါ်လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ နဂိုမူလ သီးနှံပင်မျိုးစေ့ရှိရမယ်၊ စိုက်ပျိုးဖို့ ရာသီဥတု၊ ရေခံမြေခံ၊ နည်းပညာ၊ ထုံတမ်းဓလေ့ ရှိရမယ်။ ကုန်းတွင်းပိတ် တိုင်းပြည်မှာ ဝေလငါးဖြစ်ဖို့ ကံမရှိဘူး။
တချက်ချက် ချို့ယွင်းနေရင် အခြားအရာရာ အားလုံး တူပါလျက် ကိုယ်ကခံစားခွင့်မဲ့တယ်။ အဲဒါတွေအားလုံး တပြိုင်ထဲ ဖြစ်ပေါ်စေတာ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ကံပဲ။ အဲဒီကံ အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်ပြီး လက်ရှိဘဝမှာ ဘယ်လောက်ခံစားခွင့်ရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက် လွဲချော်နိုင်သလဲ ကွဲပြားသွားတာ…။ ဆိုးတိုင်းအဆိုးမဟုတ် (ဒီထက်ပိုမဆိုးသွားတာကြောင့်) ကောင်းတိုင်း အကောင်းမဟုတ်ဘူး (အမှားဖက်တွန်းပို့စေနိုင်လို့)။ ယခုထက်ပိုမကောင်းဖို့ လုပ်တိုင်းဖြစ်အောင် အကုသိုလ်ကံက ဖန်တီးပေးတတ်သလို အခုထက်ပိုမဆိုးစေဖို့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကုသိုလ်ကံနဲ့ တားဆီးပေးထားတတ်တယ်။ ပြုခဲ့တဲ့ကံရဲ့ ကောင်းမွေဆိုးမွေဆိုတာ ကာယကံရှင်အပေါ် အများကြီးဆိုင်တယ်။ အဲဒီအသိညဏ် ဖြစ်စေတဲ့ကံကို အသုံးပြုတာ၊ အသုံးမပြုတာ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကံအလုပ် သို့မဟုတ် ဝီရိယနဲ့ညဏ်ပဲ…။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းပုံပြင်လိုပဲ ညဏ်နဲဖို့ ကံပါလာပေမဲ့ ပါမောက္ခဆရာကြီးပြောတဲ့ “မအိပ်မနေ အသက်ရှည်” စကာတခွန်းကို သုံးလိုက်တော့ ဘုရင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါလည်းပြောရင် ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ ကံရှိနေသေးလို့ပေါ့ကွာ သို့ပေမဲ့ အားထုတ်မှု အလုပ်ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပါလာတဲ့ကံအား အသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေ သုံးသပ်နိုင်တယ်။